Hiran State - News: HS:- Ciidamo badan oo al qacida ah oo gaaray Jowhar iyo Bulo Burde
HS:- Ciidamo badan oo al qacida ah oo gaaray Jowhar iyo Bulo Burde
HS:- Kadib dagaalo is xig xiga oo maalmahan joogto uga socday Jubooyinka iyo Gedo ayna yaraadeen dagaaladii ka socday Hiiraan ayaa ugu danbeyn waxaa si weyn u soo buux dhaafiyey ciidamo ka tirsan Al qacidada Soomaaliya si ay maalmo ugu sii nagaadaan Magaalada Jowhar iyo Bulo Burde oo ka kala tirsan Sh/dhexe iyo Hiiraan.
Ciidamadan oo kuwooda soo gaaray Bulo Burde dhaqdhaqaaqooda iyo awoodooda siweyn loola socdo loona sugayo intii ay ka soo aruurayaan tan iyo markii ay lumiyeen taageeradii guud ee shacabka Soomaaliyeed ayaa hada magaalada kaka sugan dhinaca koofureed iyagoona saldhigooda ugu weyn ka dhigtay degmada Buq Aqable oo ay ku sugan yahiin sida warar sugan lagu helayo hogaamiyaal sar sare oo ka tirsan ururka oo u badan ajaaniib dagaalka halkaas ka hageysa.
Dhinaca kale kulan dhex maray hogaamiyaasha Al qaacida kuwooda ka soo jeeda Hiiraan iyo wax garad degaanka ah ayaa ku dhamaaday natiijo la,aan kadib markii ay dhalinyaradii la kulantay waxgaradka ay sheegeen in aysan hubkooda dhigeyn ilaa nafsadooda laga damaanad qaadayo oo ay Hiiraan noqoneyso goob ay ka jirto nidaam iyo kala danbeyn.
Waxaa kale oo ay sheegeen in meelo badan oo Hiiraan ka mid ah xoog looga soo saaray inta dhimana ay xoog uga bixi doonaan iyagoo sheegay in aysan iyagu ku qanacsaneyn in Shabaab ku biirto Al qacida laakinse ay doonayaan in la helo cid damaanad qaata naftooda iyo xoolahooda.
Sikastaba inta badan guulaha ay ciidamada Hiiraan ka gaaraan dagaalada Hiiraan waxaa sabab u ah in ay shacabkii kalsoonidii kala laabteen taasi oo yareysay guulahii is xig xigay ee ay horey uga gaareen dagaalo fara badan oo ay xarakadu gashay.
Dhacdada ugu yaabka badan xitaa hadii ay hub culus la soo galaan magaalada xili saq dhaxe ah waa la maqlayaa oo saraakiisha ciidamada Hiiraan meeshooda ayaa loogu geyaa war bixinta iyo macluumaadka, halka dhawr sano ka hor macluumaadka iyo ciidamada Hiiraan oo xiligaas ku sugna Kalbeyr Shabaab heli jireen.
Aduunyada waxaa wax lagu yahay shacabka mar hadii ay ku nacaane guul badan ma jirto sidaasina waxa laga soo xigtay mid ka mid ah dhalinyaradii waxgaradka kula kulmay Bulo Burde. dhalinyarada ayaa markii hore waxgaradka u sheegay amaba kula hadlay hadalo qalafsan iyo awood aysan laheyn oo markaasi aysan ka muuqan, laakinse qaar iyaga ka mid ah oo waxgaradka si hoose ula hadlay ayaa sheegay in ay doonayaan damaanad qaad dhab ah intii aysan iyagu dhigin hubka.
La soco wararkeena danbe iyo Bulo Burde oo ay diyar yahiin ciidamadii...........
· admin on February 19 2012 16:50:15 · 0 Comments · 1649 Reads ·
14,586,244 unique visits